ေရႊျမန္မာမွ ႀကိဳဆိုပါတယ္: November 2019
အဆင့် ၁: SMART ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ SMART ရည်မှန်းချက်များသည်တိကျသော၊ တိုင်းတာနိုင်သော၊ သင်၏အတွေးခေါင်းဆောင်မှုကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ၊ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့အသွားအလာတိုးခြင်းသို့မဟုတ် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်တိုးစေခြင်းစသည်တို့မှသင်ထွက်ချင်သောအရာကိုရည်မှန်းချက်ထားပါ။
အဆ ့် ၂: အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်များ။ မင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သင်၏အကြောင်းအရာသည်သူတို့ဖတ်လိုသို့မဟုတ်ကြည့်ချင်သောအရာများကို ဦး တည်။ မဟာဗျူဟာလား။ သူတို့ကဘာကိုရှာဖွေပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမေးနေတာလဲ။ သင့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စမ်းနှိမ်နင်းချိန်မှာဒီမေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
Posted by manawphyulay at 2:29 AM No comments:
Labels: Tips, စီးပွားရေး, ဗဟုသုတ
အတွေးခေါင်းဆောင်မှုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကသူတို့ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကုမ္ပဏီမှခေါင်းဆောင်များအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသောနည်းဗျူဟာပါ ၀ င်မှုဖြစ်သည်။ အတွေးခေါင်းဆောင်မှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးသင်၏နယ်ပယ်တွင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အတွေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်လာရန်အတွက်ပညာရေး၊ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီး၍ မြှင့်တင်ရန်နှင့်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးကွန်ရက်များတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏ပရိသတ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏အထောက်အကူကိုပြသသောကြောင့်လူတစ် ဦး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသည် အတွေးခေါင်းဆောင်မှုကို အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းဗျူဟာတစ်ခုအဖြစ် သုံးနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး က သင်ပေးသည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကို ရှာဖွေနေသည့်အခါ လမ်းပေါ်တွင် သူတို့သည် သင့်ကိုကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသင့်ကို ဦး စားပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ဤအရာသည် ကောင်းမည်ဆိုလျှင် သင်၏ပစ်မှတ် ပရိသတ်အတွင်း အသိအမြင်တိုးပွားစေမည်၊ ဦး ဆောင်မှုပိုများလာမည်၊
ဥပမာအားဖြင့်၊ Brian Dean သည် SEO နေရာတွင်အတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်သူလိုက်နာရမည့် content marketer အနေဖြင့်သူ၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
Posted by manawphyulay at 2:25 AM No comments:
Labels: Tips, စီးပွားရေး
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို CMS ပုံစံဖြင့်တည်ဆောက်ပါ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများဖြင့်သင်၏ site ကိုခြေရာခံ။
သင်၏ Google အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို SEO ဖြင့်မြှင့်တင်ပါ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်။
စီးပွားရေးစာမျက်နှာများကို Facebook နှင့် Yelp တွင်ဖွင့်ပါ။
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖြန့်ဖြူးသောလမ်းကြောင်းများကိုမျှဝေပါ
အခမဲ့ webinar ပူဇော်ပါ။
Posted by manawphyulay at 2:12 AM No comments:
Labels: စီးပွားရေး, ဗဟုသုတ
LinkedIn စာမျက်နှာမှာတင်သင့်တဲ့ တင်ပို့ချက်အမျိုးအစားများ ၁၀ ချက်
၁။ ဗွီဒီယို၊ ဗွီဒီယို၊
အဖွဲ့ဝင်များအကြားစကားပြောဆိုရန်ဗီဒီယိုသည်အခြားအကြောင်းအရာအမျိုးအစားများထက် ၅ ဆပိုများသည်။
LinkedIn အဖွဲ့ဝင်များသည်ဗွီဒီယိုကြော်ငြာများကိုကြည့်ရှုရန်အချိန် ၃ ဆနီးပါးမျှသောတည်ငြိမ်သောပံ့ပိုးမှုပေးသည့်အကြောင်းအရာနှင့်သုံးစွဲသောအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
သငျသညျမကြားဘူးဆိုလျှင်, LinkedIn ကကိုယ့်ဗီဒီယိုပေါ်မှာအားလုံးသွားလေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ LinkedIn Page အကြောင်းအရာဗျူဟာတွင်ဗွီဒီယိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်း (၂) နည်းရှိသည်။
LinkedIn Marketing Minute သည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအား လက်တွေ့ကျသော အကြံဥာဏ်များ ပေးရန်ရည်ရွယ်သည့် ဗီဒီယိုများဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Ann Handley ကဲ့သို့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအပါအဝင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးပွားလာပြီး ၄ င်းတို့၏ ကွန်ယက်များနှင့် မျှဝေမည်ဖြစ်သောကြောင့် လက်လှမ်းမီမှုတိုးလာနိုင်သည်။
ဒါဟာဗီဒီယိုတစ်ခုပါပဲ ဒါဟာဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုကိုမြှင့်တင်တဲ့ 30 စက္ကန့်ဗီဒီယိုပဲ! တိုတို, ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့။
စာရင်းအင်းများပါ ၀ င်သည့်ပုံများ
လူများသည်စာရင်းဇယားကိုနှစ်သက်ပြီး၎င်းတို့အားပိုမိုသိရှိနားလည်စေသည့်အရာများကိုမျှဝေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများနှင့်ပြင်ပသုတေသန / ​​စစ်တမ်းများမှထွက်ပေါ်လာသောကိန်းဂဏန်းများကိုပိုမိုကြီးမားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လူမှုရေးအကွက်များဖြင့်ပြသသည်။
သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများထဲမှနောက်ဆုံးနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအကြောင်းကိုသင်၏ပရိသတ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားစေပါ။ ထို့နောက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ပြီး၎င်းတို့မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကိုမျှဝေပါ။
သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏မစ်ရှင်နှင့်ရူပါရုံကိုတစ် ဦး အတွင်းပိုင်းကြည့်ပေးပါ။ ကုမ္ပဏီ၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုရန်နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်နောက်လိုက်များနှင့်ဖောက်သည်များအားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသရန်မရှက်ပါနှင့်။
လူများသည်ကုမ္ပဏီများမှမဟုတ်ဘဲလူများထံမှ ၀ ယ်သည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသားဆန်အောင်ပြုလုပ်ပြီးပရိသတ်ကိုသင်၏ကုမ္ပဏီ၏ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းသို့စဉ်းစားရန်အခွင့်အရေးပေးပြီးသင်၏အကောင်းဆုံး ၀ န်ထမ်းများကိုအတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်တစ်ပြိုင်တည်းဖော်ပြပေးမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Showcase Page သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ webcasts များအတွက်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များကိုတသမတ်တည်းမောင်းနှင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ (ဆုရသူ!) စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူ Live ။
၇ ကျွန်ုပ်တို့သည် eBook တစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက် အကြောင်းအရာမှယူထားသော eBook အဖုံး၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ကိုးကားချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များပါ ၀ င်သောပုံရိပ် ၄-၅ ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
Insider Tip: သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို hashtags တွေကိုအခြားသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ပို့စ်တိုင်းသည် သင်၏စီးပွားရေး သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အကြောင်း မဟုတ်ပါ။ သင်၏အတွေးအမြင် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် အခွင့်အာဏာကို သင်၏နေရာတွင် အချိန်တိုအတွင်း သို့မဟုတ် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်အမြင် ထား၍ တည်ဆောက်နိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ပထမဆုံးစာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်စေ၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ LinkedIn Pages Playbook သည်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
Posted by manawphyulay at 10:11 PM No comments:
LinkedIn စာမျက်နှာမှာတင်သင့်တဲ့ တင်ပို့ချက်အမျိုးအ...